studio eqaqambileyo neshushu ngaselwandle - I-Airbnb
studio eqaqambileyo neshushu ngaselwandle
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguFanny
Isitudiyo esihlaziyiweyo esiqaqambileyo nesishushu. Ijongile isikwere sethala leencwadi elinoxolo kwaye idibana nesitalato sabahambi ngeenyawo kunye nolonwabo lwaso (iivenkile, iivenkile zokutyela, imarike yasebusuku) Yonke into ifikeleleka lula ngeenyawo: iilwandle, izibuko kunye nevenkile ezinkulu.
Ixhotyiswe ngokugqibeleleyo ngebhedi yesofa etofotofo, isitya sokuhlamba izitya, i-oveni, imicrowave, intsimbi, isomisi seenwele, izitya njlnjl ... igumbi lokuhlambela kunye nendlu yangasese eyahlukileyo / i-wifi
I-cocoon encinci, eqaqambileyo kwaye epholileyo, ekufutshane nokuzonwabisa kunye nazo zonke iivenkile, ezixhotyiswe ngothando!
4.76 · Izimvo eziyi-404
Ndiyafumaneka kuyo nayiphi na imibuzo, ulwazi ngaphambi, ngexesha nasemva kokuhlala kwakho! ukuba ufuna uncedo olukhethekileyo (ukushicilela itikiti, iithayimthebhile zikaloliwe, njl.njl.) Ndiya kwenza konke okusemandleni am ukuzibeka enkonzweni yakho!
Ndiyafumaneka kuyo nayiphi na imibuzo, ulwazi ngaphambi, ngexesha nasemva kokuhlala kwakho! ukuba ufuna uncedo olukhethekileyo (ukushicilela itikiti, iithayimthebhile zikaloliwe, n…